Diinta Ingiriiska | Safarka Absolut
Isabella | | England
Sawir | Wikipedia
Laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, diinta ugu ballaaran ee ku dhaqanta Ingriiska ee ku riyaaqday maqaam rasmi ah waddanka waxay ahayd Anglicanism, oo ah laanta diinta kiristaanka.. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka dhacdooyinka taariikhiga ah iyo ifafaalooyinka sida socdaalka ayaa sababay in diimo kala duwan ay ku wada noolaadaan xuduudaheeda. Qoraalka xiga waxaan ku eegaynaa kuwa ugu caansan diinta Ingiriiska iyo xiisaha qaar ka mid ah.
1.1 Madhabta Anglican
4.1 Caqiidada Hinduuga
5.1 Caqiidada Buddhist
6 Diinta Yuhuudda
6.1 Cilmiga Yuhuudda
Diinta rasmiga ah ee England waa Anglicanism, oo ay ku dhaqmaan 21% dadweynaha. Kaniisada England waxay la midowday kaniisada katooliga ilaa qarnigii XNUMXaad. Tani waxay soo baxday amar ka soo baxay King Henry VIII ka dib ficilkii sarreynta ee 1534 halkaasoo uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxa ugu sarreeya kaniisada dhexdeeda boqortooyadiisa iyo halka uu ku amro maadooyinkiisa inay ka baxaan adeecida diinta Pope ee Clement VII, oo ka soo horjeeday xaqiiqda ah in boqorka ayaa furay boqorada Catherine ee Aragon si uu u guursado gacalisadiisa Ana Bolena.
Sharciga 'Treason Act' ee isla sanadkaas ayaa cadeeyay in kuwa diiday ficilkan oo boqortooyada ka xayuubiyey sharaftiisa inuu yahay madaxa Kaniisada England ama sheegta inuu yahay bidco ama is khilaafsan waxaa lagu soo oogi doonaa khiyaano qaran oo ciqaab dil ah. . Sanadkii 1554 Boqoradii Mary I ee reer England, oo ahayd Katoolik cibaado leh, ayaa tirtirtay ficilkan laakiin walaasheed Elizabeth waan ku soo celiyey dhimashadeeda.
Sidaas ayaa lagu bilaabay muddo dulqaad la’aan diineed oo ka dhan ah Katooliga iyadoo lagu dhawaaqayo dhaarta Sharciga Sarreynta oo waajib ku ah dhammaan kuwa qabanaya jagooyinka dadweynaha ama kaniisada ee boqortooyada. Labaatankii sano ee la soo dhaafay ee dowladdii Elisabeth I, maadaama Katoolikkii laga xayuubiyay awoodoodii iyo nasiibkoodii, waxaa jiray geeri fara badan oo kaatoolig ah oo ay amartay boqoradda oo ka dhigtay shuhaddo badan oo kaniisadda Katooliga ah sida Jesuit Edmundo Campion. Waxaa la waafajiyay Pope Paul VI sanadkii 1970 isagoo ka mid ahaa afartan shahiiday England iyo Wales.
King Henry VIII wuxuu ahaa mid ka soo horjeedda Protestant-ka iyo fiqiga cibaadada Katooliga. Xaqiiqdii, waxaa loogu dhawaaqay "Difaaca Iimaanka" diidmadiisa Lutheranism. Si kastaba ha noqotee, si loo hubiyo baabi'inta guurkiisa wuxuu go'aansaday inuu ka baxo Kaniisadda Katooliga oo uu noqdo madaxa ugu sarreeya Kaniisadda England.
Heer fiqi ahaaneed, Anglicanism-kii hore si weyn ugama duwana Kaatooligga. Si kastaba ha noqotee, tiro sii kordheysa oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha diintan cusub ayaa muujiyey dareenkooda ku aaddan Dib-u-habeeyayaasha Protestant-ka, gaar ahaan Calvin iyo sidaas darteed Kaniisadda Ingiriiska si tartiib tartiib ah ayey ugu beddeshay isku dhafka u dhexeeya dhaqanka Katooliga iyo Dib-u-habaynta Protestant-ka. Sidan oo kale, Anglicanism waxaa loo arkaa inay tahay diin u dulqaadanaysa caqiidooyin kala duwan oo kala duwan oo kala duwan marka lagu daro waxyaabaha aasaasiga u ah diinta kiristaanka.
Iyadoo ay ka yar yihiin 20% dadweynaha, Katooliggu waa diinta labaad ee Ingiriisku ku dhaqmo. Sannadihii ugu dambeeyay caqiidadani waxay la kulantay dib-u-dhalasho Ingriiska maalin walbana wax badan ayaa ka jira waddanka. Sababahu way kala duwan yihiin, inkasta oo laba ka mid ahi leeyihiin culays aad u weyn: dhinaca kalena, hoos u dhaca kaniisadda England maaddaama qaar ka mid ah kuwa aaminka ahi ay u beddeleen Katooliga sababo la mid ah iimaanka ama ay si fudud u qaateen diin la’aanta Dhinaca kale, soogalooti badan oo Katoolik ah ayaa yimid Ingriiska kuwaas oo si firfircoon ugu dhaqma waxay aaminsan yihiin, sidaas darteedna neefsasho hawo nadiif ah ugu soo celiya bulshada Katooliga.
Waxay sidoo kale gacan ka geysatay dib u soo nooleynta Katooliga ee England in shakhsiyaadka bulshada ee jagooyinka ku habboon ay si cad ugu dhawaaqeen naftooda Katooliga wadan ilaa iyo waqti aan fogeyn kuwani aaminka ahi ay ku noolaayeen faquuq iyo in laga soocay jagooyinka shacabka iyo militariga. Tusaalaha dadka caanka ah ee katooliga ee England waa wasiirka shaqada Iain Duncan Smith, agaasimaha BBC Mark Thompson ama raiisel wasaarihii hore Tony Blair.
Diinta seddexaad ee ugu badan ee dadka ku dhaqmaan England ay tahay diinta Islaamka, oo ay ku nool yihiin 11% waana caqiidada ugu soo korodhay sanadihii la soo dhaafay sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Qaranka. Waxay ku taal magaalada caasimada ah ee London, halkaasoo muslimiin aad u tiro badani ku urursan yihiin oo ay ku xigaan meelo kale sida Birmingham, Bradford, Manchester ama Leicester.
Diintani waxay dhalatay sanadkii 622 miilaadiga iyadoo lagu wacdinayo nebi Muxamed Maka (imika Sacuudi Carabiya). Intii uu hoggaaminayey iyo kuwii isaga beddelayba, Islaamku si dhakhso leh ayuu ugu faafay meeraha maantana waa mid ka mid ah diimaha leh tirada ugu badan ee aaminka ah ee ku nool Dhulka oo ay ku nool yihiin 1.900 bilyan oo qof. Intaas waxaa sii dheer, Muslimiinta waa dadka ugu badan ee ku nool 50 dal.
Islaamku waa diin tawxiid ah oo ku saleysan Quraanka kariimka ah, oo aasaaska aasaasiga ah ee muuminiintu u yahay "Ilaah kale ma jiro Ilaahay mooyee Muxammadna waa nebigiisa."
Diinta xigta ee ugu badan ee aaminka ahi waa Hinduuga. Sida islaamka oo kale, soo galootiga Hinduuga ah ee u soo shaqo tagay England waxay la yimaadeen dhaqankooda iyo caqiidadooda. Qaar badan oo ka mid ah waxay u soo guureen inay ka shaqeeyaan Boqortooyada Ingiriiska ka dib xorriyadii Hindiya 1947 iyo dagaalkii sokeeye ee Sri Lanka oo bilaabmay 80s.
Bulshada Hinduuga ayaa ah kuwo aad u tiro badan Ingriiska, sidaa darteed 1995 waxaa la dhisay macbadkii ugu horeeyay ee Hinduuga, waqooyiga caasimada Ingriiska ee Neasden, si ay aaminku u tukadaan Waxaa lagu qiyaasaa in adduunka ay ku nool yihiin 800 milyan oo Hindu ah, iyagoo ka mid ah diimaha kuwa ugu aaminka badan adduunka.
Si ka duwan diimaha kale, Hinduusku ma laha aasaasi. Maaha falsafad ama diin isku mid ah ee waa caqiidooyin, cibaado, caadooyin, cibaado iyo mabaadi'da anshaxeed ee sameeya dhaqan guud, oo aan lahayn urur dhexe ama astaamo qeexan.
In kasta oo diinta Hindu-du leedahay ilaahyo badan iyo demoqoryo, haddana inta badan kuwa aaminka ahi waxay u heellan yihiin muujinta saddex-geesoodka ah ee ilaaha ugu sarreeya ee loo yaqaan Trimurti, midnimada Hindu-ga: Brahma, Visnu iyo Siva, abuuraha, ilaaliyaha iyo baabbi'iyaha siday u kala horreeyaan. Ilaah kasta wuxuu leeyahay avataar kala duwan, kuwaas oo ah reincarnation ee ilaaha Dunida.
Sidoo kale waa wax iska caadi ah in laga helo kuwa raacsan Buddhism-ka England, gaar ahaan wadamada Aasiya oo taariikh la wadaaga England taas oo ka dhalatay boqortooyadii Ingriiska ee lagu aasaasay qaaradaas ilaa qarnigii XNUMXaad. Dhanka kale, waxaa sidoo kale jiray tiro aad u badan oo diintaan laga badalay oo laga qaatay diimo kale.
Budhiismku waa mid ka mid ah diimaha waaweyn ee meeraha marka loo eego tirada dadka raacsan. Waxay soo bandhigeysaa iskuulo kaladuwan oo aad u tiro badan, caqiidooyin iyo dhaqano ku saleysan juquraafi ahaan iyo taariikhi ahaan lagu kala soocay Buddhism ka waqooyiga, koonfurta iyo bariga.
Budhiismku wuxuu ka soo ifbaxay qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii miilaadiyada kana soo baxay casharradii ay siiyeen Siddhartha Gautama, aasaasihii waqooyiga bari ee Hindiya. Wixii intaa ka dambeeyay, waxay si ballaadhan ugu bilaabatay Aasiya.
Waxbarista Budha waxaa lagu soo koobay "Afar Xaqiiqo sharaf leh" oo ah aaminsanaanta asaasiga ah ee sharciga Karma. Sharcigani wuxuu sharxayaa in ficilada aadanaha, ha fiicnaadeen ama ha xumaadeen, inay saameyn ku leeyihiin nolosheena iyo jidhkeenna soo socda. Sidoo kale, Budhiismku wuxuu diidayaa go'aaminta maxaa yeelay bani'aadamku wuxuu xor u yahay inuu qaabeeyo aayihiisa oo ku saleysan ficilkiisa, in kasta oo laga yaabo inuu dhaxlo cawaaqibyo gaar ah oo ku saabsan wixii uu ku soo maray noloshii hore.
Diinta Yuhuuddu sidoo kale waxay ka jirtaa England waana mid ka mid ah diimaha ugu faca weyn adduunka, oo ah kan ugu horreeya oo ah nooc tawxiid, maaddaama ay xaqiijinayso jiritaanka Ilaaha keligiis ah ee awoodda iyo awoodda leh. Masiixiyaddu waxay ka timaaddaa diinta Yuhuudda maxaa yeelay Axdigii Hore ayaa ah qaybta koowaad ee Kitaabka Quduuska ah ee Masiixiga oo Ciise, wiilka Ilaah ee Masiixiyiinta, wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Yuhuudda.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay caqiidadeedu waa Tawreed, oo ah, sharciga Ilaah oo lagu muujiyey amarradiisii ​​uu Muuse siiyey Sinai. Amaradaas, bini aadamku waa inuu ku xukumaa noloshiisa una hogaansamaa doonista rabbaaniga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Diinta Ingiriiska
Ku jawaab si derly ah
Halloween ee Talyaaniga
Macmacaanada caadiga ah ee Marooko iyo macmacaanka